I-china i-cooler box mveliso kunye nabathengisi Huizhou
Ibhokisi epholileyo ye-VIP ikwayibhokisi yokufudumeza engenanto ngaphandle kwamandla ombane ngayo, ijolise ekuhanjisweni kwamayeza ngenxa yezinga eliphantsi lokuhambisa ubushushu ukuthintela ukupholisa okanye ubushushu ekudluliseni. Ngokwesiqhelo zisetyenziswa kunye nepakethe yejeli kunye nezitena .
I-VIP (Iphaneli yokuThintela ukuCoca) Ibhokisi epholileyo
1.Ibhokisi epholileyo ye-VIP ikwayibhokisi yokufudumeza engenanto ngaphandle kwamandla ombane ngayo, ijolise ekuhanjisweni kwamayeza ngenxa yezinga lokushisa eliphantsi kakhulu lokuthintela ukupholisa okanye ubushushu ekudluliseni. kunye nezitena.
Ibhodi yokugquma ye-2.Vacuum (ibhodi ye-VIP) yenye yezinto zokufakelwa kwe-vacuum, yenziwe ngezinto zokuzalisa eziphambili kunye nokukhuselwa komphezulu wokhuseleko, inokukuthintela ngokufanelekileyo ukudluliswa kobushushu okubangelwa kukuhambisa umoya, ukuze ukuqhuba kobushushu kube kakhulu kuncitshisiwe, ukuya kuthi ga kwi-0.002-0.004W / mk, 1/10 yokuqhutywa kobushushu bezinto zokwambathisa zemveli. Kwaye izinto zokuzalisa ezingundoqo ziyafumaneka ngefayibha yeglasi kunye nesilicon yegesi, eyokuqala yokuqhuba kwe-thermal yi-0.0015w / mk, kunye neyokugqibela ye-0.0046w / mk
Ngokwesiqhelo, ibhokisi epholileyo ye-VIP yenziwe ngamacandelo amathathu (ngaphakathi, phakathi nangaphandle) ukunika iimveliso zakho ukhuseleko olupheleleyo.Kwaye elona candelo liphambili kukuhambisa okungaphaya, okt i-VIP kunye ne-VIP kunye ne-PU. Izinto ezikhethiweyo ezikhethiweyo nceda ubhekise kwitafile yeparameter.
4. Ngezi mpawu zibalaseleyo ze-VIP, iibhokisi zethu ezipholileyo ze-VIP zintsonkothile kwaye zilungiswe ngononophelo ukulungiselela iimveliso ezinxulumene nokuhambisa amayeza ngokukhuselekileyo, ngesiqhelo ukubek'esweni kobushushu kubalulekile.
5. Kwaye sele sikulungele ukuqinisekisile izisombululo ekubhekiseni kuzo abathengi.
I-1.VIP ibhokisi epholileyo ayenzi ngokuqinisekileyo ukupholisa, ke ukwenza izinto zebhokisi kubaluleke kakhulu. Ngenxa yokuqhuba kwayo okuphantsi kakhulu kwe-thermal, ibhokisi epholileyo ye-VIP isetyenziselwa iimveliso ezilawulwa bubushushu ngokungqongqo, ezinje ngokuhamba ekhemesti.
Zisetyenziselwa ezinye isiphelo esiphezulu, iimveliso ezinobuzaza obushushu kuba amaxabiso abo ephezulu kakhulu.
DB + VIP
I-1.Ukuqhuba kweyona thermal iphantsi kunye nokusebenza kokona kulungileyo okwangoku
Ulawulo lobushushu 2.recise
Iphaneli yebhokisi ye-2.Thinner yokugcina indawo, encinci, elula, elula ngakumbi kunebhokisi yesiko epholileyo.
3.Ibhokisi yenziwe ngetekhnoloji yomzimba iphela, eyenza ibhokisi ukuba yomelele kwaye yomelele.
4. Ingqele emide ihlala ukuya kuma kwi-72h, 96h, 120h
5. Ngempembelelo yayo yokugquma, iibhokisi ezipholileyo ze-VIP zikhetheke kakhulu ingakumbi ukuthunyelwa kwekhemesti.
I-1 mayibe ngononophelo olukhulu ekukhetheni izisombululo ezifanelekileyo kuthumelo lwakho olukhethekileyo lwamayeza.
Izisombululo ezikhethiweyo kufuneka ziqinisekiswe ngaphambi kokusetyenziswa kwangempela
3.Ibhokisi epholileyo inokuhamba kakuhle nesitena somkhenkce okanye ipakethi yomkhenkce wejel ezisa ukubanda ngokweemfuno zakho zeqondo lobushushu.
Egqithileyo Zokuvala Box Ibhokisi
Okulandelayo: Ibhokisi epholileyo ye-EPP